Kutheni iIndleko zeeKholeji zeeKholeji zininzi kakhulu?
Ixabiso leencwadi ezinokumangalisa kubafundi abatsha beKholeji
Esikolweni esiphakeme, iincwadi zifumaneka ngokubanzi kwisithili esikolweni kwixabiso lokuhlawula irhafu. Akunjalo kwikholeji. Abafundi abatsha bekholejini bayothuka xa befumanisa ukuba iincwadi zabo zeekholeji zingaphaya i-$ 1,000 ngonyaka. Eli nqaku linceda ukuchaza iindleko.
Qiniseka ukuba ufunda inqaku malunga nendlela yokugcina imali kwiincwadi zekholeji.
Iincwadi zeKholeji azizithethi. Incwadi nganye iya kudla ngaphezu kwama-$ 100, ngamanye amaxesha angaphezu kwama-$ 200.
Iindleko zeencwadi zonyaka wekholeji zikwazi ukukhupha i-$ 1,000. Oku kuyinyaniso ukuba ngaba uya kwiyunivesithi yangasese ebiza ixabiso eliqhelekileyo okanye i- college ye-college engafanelekanga, indawo kunye nebhodi, uluhlu lwamanani encwadi nayiphi na iya kuba yinto efana nayo nayiphi na ikholeji.
Izizathu zezi ncwadi zibiza iindleko ezininzi:
Inani lenombolo - Ukuqhathaniswa nesikolo esiphakeme, i-semester yekholeji isebenzisa iincwadi ezininzi. Uza kuba neendawo zokufunda ezide kunye nezifundo ezininzi ziya kubela ukufundwa kwincwadi engaphezu kweyodwa.
I-Copyright - Abapapashi beemibhalo ezinkulu zemiqulu yamuva kufuneka bahlawule iintlawulo ze-copyright kubo bonke ababhali beencwadi. I-anthology yezibongo kwiklasi yeencwadi, umzekelo, inokubandakanya ukucima amanqaku angama-copyright.
Iincwadi ezizodwa ezikhethekileyo - Iincwadi ezininzi zeekholejini zizodwa kwaye ezi zinto azifumaneki nakwezinye iincwadi. Umthamo ophantsi weencwadi ezishicilelweyo kunye nokungabikho komncintiswano wemakethe kwenza abavakalisi bafikelele amaxabiso.
Izinto ezikhoyo - Nangona i-Shakespeare's Hamlet ingatshintshi ukususela kunyaka omnye ukuya kwi-elandelayo, izifundo ezininzi zeekholejini ziyaqhubeka ziqhubeka. Abapapashi bafuna ukugcina iincwadi zabo ngokukhawuleza ngokukhupha ii-editions ezintsha. Incwadi yokufunda kwizinto eziphilayo, ukufundwa kweenkwenkwezi, ugqirha, okanye ingqondo engavumelekanga iya kuba yintlungu xa ingaba yiminyaka eyi-15 ubudala.
Abahlobo be-intanethi -Iincwadi ezininzi zezifundo zizaliswa yimithombo ye-intanethi. Imali yokubhaliselwa yakhiwe kwiindleko zeencwadi.
Amagatya - Kwiiklasi zobugcisa, i-lab kunye nesayensi, iindleko eziqikelelweyo zeencwadi ziquka ukubonelela, iimfuno zebhanki kunye nezibalo
Ukungabikho kweencwadi ezisetyenzisiweyo - Abapapashi abenzi imali xa ezininzi iincwadi zisebenziseka. Ngenxa yoko, baya kukhulula ukukhishwa kwimiqulu emitsha kwiminyaka embalwa ukwenzela ukuba iincwadi zisetyenziswe. Uya kufuneka uthethe kwiprofesa ukuba ubone ukuba iimpapasho zangaphambili zencwadi zamkelekile kwiklasi yakho.
Ukuphonononga kunye neefomki - Abavakalisi beencwadi bafumana imali kuphela xa abafundisi beekholeji bafumana iincwadi zabo. Oku kuthetha ukuba bathumela iikopi zokuhlaziya zamahhala kubalimi abanokuba ngabafundi. Iindleko zalo mkhuba zikhutshwe ngabafundi abaphezulu abahlawula iincwadi. Kwiminyaka yakutshanje iikopi zokuphonononga ziye zahlala zikhompyutheni, kodwa abavakalisi bafuna ukufaka imali ekukhuthazeni iimveliso zabo kubafundisi-ntsimi.
Ulawulo lwe-Faculty - Esikolweni esiphakeme, ukhetho lweencwadi xa zihlala zigqitywe liSebe okanye kwikomiti. Ixabiso kunye neengxoxo kunye nabapapashi banokuba yinxalenye yale nkqubo. Kwiikholeji, amalungu e-faculty ngabanye alawulwa ngokupheleleyo kwiincwadi zabo. Akunabo bonke abaprofestile abajongene neendleko, kwaye abanye baya kuba neencwadi ezibiza kakhulu abazibhalileyo (ngamanye amaxesha baqokelela iimbopheleleko kwinkqubo).
Abafundi beKholeji bavame ukuzifumana beboshwe ngenxa yexabiso eliphezulu leencwadi. Ukungazithengi iincwadi akuyiyo inketho ukuba umfundi unethemba lokuba uphumelele eklasini, kodwa iindleko eziphezulu zingavumelekanga. Ngenhlanhla, kwiimeko ezininzi kukho iindlela zokugcina imali ngokuthenga iincwadi ezisetyenzisiweyo, iincwadi zokuqashisa, kunye kwezinye iimeko ukuxelela iincwadi (kufunda ngakumbi malunga nokugcina imali kwiincwadi).
I-Article echaphazelekayo: Ukwahlukana phakathi kweZikolo eziPhakamileyo nakwiiKholeji zeeKholeji
Iincwadi zeekholeji zinokungabonakali ngokukhawuleza ngaphezu kwama-R1 000 ngonyaka, kwaye lo mthwalo ngamanye amaxesha unokuba ngumqobo omkhulu kwimpumelelo yezemfundo kubafundi abaxhasiweyo bezemali abangakwazi ukulawula iindleko. Ukungathengi iincwadi akuyiyo inketho ukuba uceba ukuphumelela kwikholeji, kodwa ukuhlawula iincwadi kunokubonakala kungenakwenzeka.
Kukho izizathu ezininzi zexabiso eliphezulu leencwadi. Kukho neendlela ezininzi zokwenza iincwadi zakho zibize ngaphantsi:
Thenga i-Used - ezininzi zeencwadi zeencwadi zeekholeji zithengisa iincwadi ezisetyenzisiweyo xa zikhoyo. Ukulondolozwa kudla malunga nama-25%. Ulwazi olukwincwadi esetyenzisiweyo lufana nolutsha, kwaye ngamanye amaxesha uya kuba luncedo kumanqaku omfundi wangaphambili. Yiya kwi-bookstore kwincwadi yokuqala esetyenziswayo idla ngokuthengisa ngokukhawuleza.
Thenga i-Intanethi - Iincwadi ze-intanethi ezifana ne-Amazon kunye neBarnes kunye noNoble zihlala zithengisa iincwadi ukuya kuma-20%. Ngamanye amaxesha unokuthabatha ikopi esetyenzisiweyo kwi-intanethi. Kodwa qaphela. Qinisekisa ukuba ufumana ulungiso oluchanekileyo, kwaye qi niseka ukuba iindleko zokuthutha azikho ngaphezu kokusindisa.
Thenga i-Electronic Edition - ezininzi iincwadi zezifundo ziyafumaneka njenge-e-ncwadi, kwaye iindleko ziya kuba ziphantsi kangako kuba kungekho zindleko zokuphathekayo, ukushicilela okanye ukuthumela i-e-ncwadi.
Thengisa iincwadi zakho - ezininzi iikholeji zineprogram yokuthenga incwadi. Ukuba incwadi yinto eningayifuni kwixesha elizayo, unako ukufumana inxalenye yotyalo-mali yakho ngokuyithengisa kwisitresho seencwadi emva kokuphela kwe-semester.
Thenga kuBafundi Abafundi - Ukuba omnye oontanga bakho uthatha iklasi le semester oceba ukuyithatha i-semester ezayo, nikela ukuthenga iincwadi ngqo kumfundi. Unokufumana isaphulelo esibalulekileyo kodwa usanikeza intengo engcono kunokuba ikholeji iya kuhlawula ngayo inkqubo yayo yokuthenga.
Yiya kwiThala leencwadi - Ezinye iincwadi zingabakho kwiikholeji okanye kwilayibrari yoluntu. Musa nje ukubhala kwincwadi engeyona eyakho.
Ukuboleka Incwadi - Ngaba unokufumana umfundi othe wathatha iklasi efanayo kwi-semester yangaphambili? Okanye mhlawumbi uprofesa unakho ikopi eyongezelelweyo ukuba uya kukulungele ukuboleka.
Ikopikopi - Abanye abaprofeti basebenzisa inxalenye encinane yencwadi. Ukuba kunjalo, unakho ukukopa ikopi eyabelweyo evela kwincwadi yomfundi ekwakho kunokuthenga incwadi ngokwakho. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ukukopisha iincinci ezinkulu zeencwadi kubakho ukuphulwa kwe-copyright.
Ukuqeshisa Iincwadi Zakho - Ukuqashwa kwencwadi kuye kwanda ekuthandeni kwiminyaka yamuva. I-Amazon inika iindawo zokuqeshisa kwiincwadi ezininzi ezifundwayo ngokuqhelekileyo ngokugcina imali engama-30% okanye ngaphezulu. I-Chegg.com yindlela enye ekhethiweyo yokuqeshisa. Qiniseka ukuba uyayinyamekela iincwadi zakho ukuze ungapheli ngemali eyongezelelweyo, kwaye uqaphele ngokuqeshisa iincwadi kwizinto zakho ezinkulu-ungazifunela ngeenkcukacha ezizayo kwezinye iikhosi.
Ezinye zezi cebiso zifuna ukuba ufumane uluhlu lokufunda kakuhle ngaphambi kokuba uqale izifundo. Ngokuqhelekileyo i-bookstore iya kuba nale nkcazelo. Ukuba akunjalo, ungathumela i-imeyile ehloniphekileyo kwiprofesa.
Inqaku lokugqibela: andincomo ukukwabelana nencwadi kunye nomfundi oseklasini efanayo nawe.
Kwiklasini, ngamnye umfundi uya kulindela ukuba abe nencwadi. Kwakhona, xa iphepheni kunye nexesha lokuhlola lijikeleza, nonke bobabili nifuna ukufumana incwadi ngexesha elinye.
Indlela yokukhetha iiKlasi zakho zeKholeji
Yintoni Oyenzayo Ukuba Uphumelele Uvavanyo
Ngaba Ndingazibini Zimbini?
Indlela yokuphumelela iklasi yeKholeji
Yintoni ongayenza Ukuba uhamba kwiiKlasi zaseKholeji zakho
I-Bachelor Popular Degrees Among Among Online Students
Indlela yokusebenza kwiProjekthi yeqela leKholeji
UManny Pacquiao: Ingxelo yokulwa noLwesibini
Imbali yeBuenos Aires
I-Therapsid (i-Reptile-Like Reptile) Imifanekiso kunye neeprofayili